Endless Sky: yakavhurika-sosi nzvimbo kurwa uye commerce vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Endless Sky: yakavhurika-sosi nzvimbo kurwa uye kutengesa vhidhiyo mutambo
Denga risingagumi ndiyo imwe yemahara uye yakavhurwa sosi yemitambo yemavhidhiyo iriko yeGNU / Linux. Isu tato taura pane dzimwe nguva dzemamwe mazita akareruka akadai saPingus, Super Tux Kart, nezvimwewo, kana vamwe chimwe chinhu chakasimukira senge Zviuru gumi BC, uye ikozvino unogona kuwedzera imwezve kune iyi runyorwa ...
Iyo Isingagumi Sky vhidhiyo mutambo mutambo wevhidhiyo unobatanidza iyo kutengeserana uye nzvimbo kurwa, saka unogona kuva nemaawa ekunakidzwa nezvikepe uye nehondo dzepamoyo iwe dzaunofanira kubata nadzo. Iyo 3D yakasarudzika, uye imwe inoenderera ichikudziridza nekuvandudza kuwedzera kugona kwayo. Ikozvino neyekutanga yakagadzikana kuburitsa nekuda kwekuvandudzwa kutsva.
Endless Sky zvakare iri vhidhiyo mutambo we sandbox maitiroNdiko kuti, isiri-mutsara mutsara wevhidhiyo uyo unokupa iwe mukana wekutsvaga nenzira yakafanana kune mazita akadai seStar Control, Elite, kana Espace Velocity.
Mariri iwe unotanga semutungamiriri wengarava diki, uye iwe unozokwanisa kusarudza zvaunoda kuita. Iwe uchafanirwa kuita mamwe mamishini kubva pakutakura kutengesa, kurwa kana kuongorora.
Nezvinyorwa zvitsva zvakaunzwa mu mhando 0.9.12, iko zvino pachave nemabasa matsva anowanikwa kuti aite muEndless Sky, uye nekumwe kugadzirisa kwechadenga, mamishini matsva, mairi mairi asteroid, nyowani nyika / nyeredzi mhando, uye zvimwe zvekuwedzera.
Kana iwe uchida kuyedza zvachose mahara uye usingaverenge mamwe mazwi nezvazvo, une dzimwe nzira dzinoverengeka dzekuti ubate Endless Sky izvozvi:
Tora risingaperi Sky kubva kuValve's Steam chitoro.
Dhawunirodha iyo Flatpak Universal Package kuitira nyore kuiswa pane chero distro.
Nongedza kodhi yeprojekti pane yeGitHub chikuva.
Uye nokuda mamwe mashoko nezve chirongwa, kuti usvike kuona bhuku racho, wiki, uye zvimwe zvinyorwa, unogona shanyira webhusaiti yavo zvakananga izvo zvakatumirwa paGitHub. Ndinovimba unoifarira! Vhidhiyo yemutambo, yemahara, Linux rutsigiro uye yakavhurwa sosi ... chii chimwe chaungabvunze
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Endless Sky: yakavhurika-sosi nzvimbo kurwa uye kutengesa vhidhiyo mutambo
Cornell nzira neLEbreOffice Munyori. Tora smart manotsi
Nzira yekuziva sei CPU tembiricha muLinux neGUI